မောင်ပေ၊ မြန်မြန် လာခေါ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မောင်ပေ၊ မြန်မြန် လာခေါ်ပါ
မောင်ပေ၊ မြန်မြန် လာခေါ်ပါ
Posted by ဂျစ်စူ on Feb 22, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 44 comments
“ဖလမတွေ၊မအလတွေ၊ကိုယ့်တိုက်ခန်းနဲ့ကိုယ်နေတာ ဘယ်သူ့ သောက်ဂရုစိုက်ရမှာလဲ
ငါ့ဘာသာနေချင်သလိုနေမယ် နင်တို့ အပူ ဘာပါလို့ လဲ..နင်တို့ …ငါ့ဘာသာ..နင်တို့ ငါ့ဘာသာ.
ဆိုတဲ့အသံ နန်းစတော့ထွက်လာတော့ နားညည်းပြီး ဆက်အိပ်လို့ မရတော့
အင်း..ဒီအသံထွက်လာပြီဆိုတော့ နာရီကြည့်စရာမလို ကိုးနာရီကျော် နေလောက်ပြီ
ဆိုပြီး အင်းအဲ.အူးအားနဲ့အကြောဆန့် ဟိုလှိမ့်.ဒီလှိမ့်လုပ်ပြီး အိပ်ယာထဖို့ အားယူနေလိုက်မိတယ်။
အပျင်းကြောဆန့် ရင်း ခဏမှေးခနဲ့ ပြန်ဖြစ်တုန်း..
ဗျောင်း..ဗျောင်း..ဂျောင်း.ဖြောင်း ‘နင့်မေအ၀ှာဖြစ်လား..ငါ့မေအ၀ှာဖြစ်လား ဗျောင်.း…ဖျောင်း.ဖျောင်း
ပါးစပ်ကလဲ ရွတ် လက်ကလဲ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့နံရံကို ဆက်တိုက်ရိုက်သံ ထွက်လာတော့
ဟမလေး ကိုးနာရီခွဲလောက်ပြီဟ ဆိုပြီး မထချင်ထချင်နဲ့ထပြီး ဆိုင်တံခါးရှေ့ မျက်နှာစာမှာ
ညဘက်လာလာအိပ်တတ်တဲ့ အရူးမကြီးရဲ့ အခြေအနေကို မျက်ချေးပွတ်ရင်း တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။
သောက်ရူးမ…ကောင်းကောင်းကို အိပ်လို့ မရဘူး၊မနက်အိပ်ယာနိုးရင် ဒင်းရဲ့ ကျက်သရေမရှိလှတဲ့
အဆဲအဆို သံတွေနဲ့ ပဲ ထ.ထ နေရတယ်..
ခုလဲ သူများ ဆိုင်ရှေ့ မှာ အခန့် သားထိုင်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို ဆဲနည်းပေါင်းစုံနဲ့ဆဲယုံမက
တိုက်ခန်းနံရံတွေကိုလဲ တုတ်ကျိုးအောင် တစ်ဖြောင်းဖြောင်းချနေတာ.
နေ့ တိုင်း ဒီလိုလုပ်နေရင် မဖြစ်ချေဘူး….ကျက်သရေမှရှိ မင်္ဂလာမရှိ လာဘ်ပိတ်တယ်။
နဂိုထဲက ကိုယ့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဖုန်းဆိုင်က ဖွင့်ပေးထာတာ အစုတ်ပလုတ်။သူ့ မိတ်ဆွေကလွဲလို့ 
ဆိုင်မှာက ကိုယ်ပါမှ ၀န်ထမ်း ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတာ။
အရူးမက အဖွားကြီအရွယ်လဲမဟုတ်ဆိုတော့ သူ့ ဘာသာ အပြင်မှာ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်လာပြီး
မတော်တစ်ခုခုဆို ကိုယ်တွေ ငုတ်တုတ်မေ့မှာ။ဘာမဟုတ်ပဲ အရူးမကို ယူနေရဦးမှာမို့ 
အဲတာကြီးလန့် ပြီး နှင်ထုတ်ချင်နေတာကြာပြီ။
တစ်ဘက်က ကြည့်ပြန်တော့ ဆောင်းတွင်းကြီး မှာ အရူးမအတွက် ဆိုင်ရှေ့ ဝရန်တာမှာ အိပ်ရတာကက သူ့ အတွက် အဆင်ပြေဆုံး။မနက်ဆိုလဲ ထချင်တဲ့အချိန်မှထ ကိုယ်တွေနဲ့ပြိုင်အိပ်တာ တစ်ခါတလေ
စီးကရက်အဖြူလေး လက်ကြားညှပ်လို့ ခဲပြီး နေ့ ခင်းထိ ဆန့် ဆန့် ကြီး ယူနေတာ လူမြင်မသင့်တော်ဘူး။
ကိုယ်တွေကလဲ သနားလို့ မပြော၊မိန်းမနဲ့ယောက်ျား ဘယ်လိုနည်းနဲ့အရူးမကို ဆုံးမသြ၀ါဒ ပေးရမှန်းမသိမိုလို့လွှတ်လွှတ်ပေးထားတာ။
ဒါကြောင့်လဲ အရူးမက တခြားနေရာတွေမှာ မအိပ်ပဲ ညဘက်ဆို ဆိုင်ရှေ့ မှာ လာလာအိပ်တာကလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်ဘူး နှင်ထုတ်ကာမှ တန်ရာကျမဲ့ အရူးမ မိုလို့သနားတာတွေ၊ကိုယ်ချင်းစာတာတွေ
ချောင်ပို့ ပြီး အချိန်ရတိုင်း အရူးမကို နှင်ထုတ်လို့ ရနိုင်မဲ့ သိုင်းကွက်ပဲ ရှာရှာနေမိတော့တာပေါ့။
အဲတာနဲ့နောက်နေ့ တွေ အရူးမ အိပ်မဲ့နေရာ ရေဖြန်းထားလိုက်တယ်။ခဏပဲ အောင်မြင်တယ်
နောက်နေ့ လာအိပ်ပြီး ဆဲတယ်။နောက်တော့ လက်ရှော့ သနားပြီး မနက်မိုးလင်း မဆူပါနဲ့ မဆဲပါနဲ့ 
မရိုက်ပါနဲ့ မှာတယ် မအောင်မြင်ဘူး။အဲတော့ အရူးမ အိပ်မဲ့နေရာ ပုလင်းထောင်ပြီး ညဥ့်နက်တဲ့အထိ
ထိုင်သောက်တယ်..။အလယ်..အဲအခါကျတော့ အရူးမက ဟိုဘက်ကားလမ်းကနေ ကိုယ်တွေကို ဘုရှိုး
ရှိုးပြီး အိပ်ချင်တာမထိန်းနိုင်တော့ပဲ တခြားနေရာ သွားအိပ်တယ်။ဒီနည်း မဆိုးဘူးဟဆိုပြီး နောက် နေ့ ကျတော့ ပုလင်းထောင်
ဥာဥ့်နက်ထိ ထိုင်သောက်ကြပြန်ကော။အဲနေ့ ကျတော့ သောက်လို့ဝိုင်းတောင် မသိမ်းသေးဘူး
မစာဥက အထုတ်ဆွဲပြီး သူ့ ဘိခ်ျ ကို နေရာလာယူပါကောဗျာ..။
မစာဥကလဲ ဇရိုက်ကြမ်း အပေါက်ဆိုး ဆိုတော့ ပေါ်တင်နှင်မထုတ်ရဲပြန်ပဲ ဂျီးဒေါ်
မနက်မဆဲပါနဲ့ ..ပတ်ဝန်းကျင်က တိုင်တယ်.ကျနော်တို့ မကောင်းဘူး..အဲတာ ဂျီးဒေါ်ဆင်ခြင်ပါ..ဘာညာ
နားချတော့ မစာဥက ထုံးစံအတိုင်း သူ့ ကို ဆရာမလုပ်ဖို့ သူအကုန်သိတယ်တို့ပြောပါလေရော
ဂျီးဒေါ် ကြောင်တောင်တောင်မလုပ်နဲ့ပြောမရရင် ခင်ဗျား နောက်နေ့ လာမအိပ်တော့နဲ့တခြားနေရာသွားအိပ်
ခင်ဗျားက ပြီးရင် ဆဲဆိုနေတာ လက်မခံနိုင်ဘူး ပြောတော့
နင်တို့ ကနှင်လွှတ်ရအောင် င့ါလက်မှတ်ပါလား..ငါကပိုင်ရှင်…နင်တို့ က ဘာလဲ ဆိုပြီး အရူးကွက်နင်းပါကော။
ကိုလဲ ပေါက်ကွဲပြီး…မူးကလဲမူးနေတော့..အရူးမအထုတ်ဆွဲပြီး ခင်ဗျားမသွားရင် ဒီအထုတ် လွင့်ပစ်လိုက်မှာ
သောက်ကြီးသောက်ကျယ်တော့ လာမပြောနဲ့ ဆိုပြီး အထုတ်ဆွဲပြီး လွှင့်ပစ် ဟန်ဆောင်ပြလိုက်တော့
အရူးမလဲ နဲနဲ တော့ လန့် သွားပုံပေါ်လာကော။ဆက်ပြီး ကျန်တဲ့ အရူးမရဲ့ ဖက်စလတီတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု
ဆွဲထုတ်ပြီး မယူရင် လွှင့်ပစ်မယ်လုပ်ပြတော့ အရူးမလဲ သူ့ ပစ္စည်းလွှင့်ပစ်ခံရမှာဆိုးလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ဆွဲပါကော
ရေဘူးကိုင်လိုက်..အရူးမက လိုက်ဆွဲလိုက်…ထမိတ်ထုတ်ကိုင်လိုက် အရူးမကလိုက်ဆွဲလိုက်..
ဖျာ ဆွဲထုတ်လိုက် အရူးမက လိုက်ဆွဲလိုက်..ခေါင်းအုံးလွှင့်ပစ်မယ်လုပ်လိုက် အရူးမက လိုက်ဆွဲလိုက်
နောက်ဆုံး ကိုယ်ကတောင် မဆွဲထုတ်ရပဲ လွှင့်ပစ်ခံရမှာဆိုးလို့ အရူးမလဲ သူ့ အလိုလို တိုလီမိုလီတွေအကုန် ထမိန်စုတ်မကျန် ရှာဖွေဆွဲထုတ်ပြီး ပွစိပွစိနဲ့ဆဲဆိုအော်ဟစ်ကာ အထုတ်တွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်သယ်လျက်
ထွက်ချသွားပါကောဗျာ။အဲတော့မှ အရူးမနဲ့ ရန်ဖြစ်တာ လူလဲမော အမူးလဲပြေ ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့
အလား… တိုက်ခန်းတွေက ခေါင်လေးတွေပြူလို့ထွက်ကြည့်နေကြတာ..။
တတ်နိုင်ဘူး..ရှက်နိုင်ဘူးဗျာ..ဒီလိုမှရန်မဖြစ်ရင်…………ကောင်းကောင်း မအိပ်ရ၊ကောင်းကောင်းမထရနဲ့ 
မနက်တိုင်း ကျက်သရေယုတ်ပြီးထနေရဦးမှာ အသေအချာပဲ။
အရူးမ ထွက်သွားတာ ဒီနေ့ ထိတော့ ပြန်မလာတော့ဘူး..။အရူးမအတွက် အိပ်ယာစီစဉ်ပေးမဲ့လူရှိရင်ပြောဗျ..
တွေ့ ခဲ့ရင် လက်တို့ လိုက်မယ်။
ကောင်းကောင်းပြောတုန်းကတော့ မရဘူး..နားမလည်တဲ့ အရူးမ..အထုတ်လွှင့်ပစ်မယ်ဆိုမှ လန့် ပြီးမလာတော့တဲ့ ဂျီးဒေါ်ကြီး..မျိုးကြီး သီချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေ..
မလာပါနဲ့ ……………………လို့ ပဲ..…….။
အရူးမ နှင်ထုတ်ပုံကို တယ်လည်း မိုက်သကိုး …. ။
အဲ့ကောင်လေး …သူ့အထုတ်တွေသွားဆွဲနေတာ …. အရူးမက သူ့ပစ္စည်းလာလုပြီး ..လူကိုပါ ကြံပါတယ်လို့ .. လျှောက်မအော်တာ ကံကောင်းတယ်မှတ် …. ။
ထမိန်ထုတ်ဆွဲထားတဲ့ လက်ကြီး … အ၀တ်လျှော်စက်ထဲထည့်ပြီး .. သုံးလေးခါလောက်ဆေးပါဗျို့ ….
ကျန်ကျောင်း အိတ်ထဲ ထည့်ထားတာဂျ
တစ်ခါတလေ အစုတ်ပလုတ်တွေ ဒီတိုင်းပုံသွားတာ
ခြေမနဲ့ ကလော်ပြီး မြောင်းထဲ လွှင့်ပစ်ရတယ်
သူမဖဲ့ခင် ဦးအောင် အရင်ဖဲ့ထားရတာ
ရှင်ကြီး သများတွေကို လုပ်တုန်းက
လုပ်ပြီး.. အခုတော့ အထုပ်တစ်ခုနဲ့ ထားခဲ့ပီပေါ့လေ..
ရှူးရှူးပေါက်ချင်တိုင်း ဟိုင်းဝေဘတ်စ်ကားပေါ် ရောက်နေပါစေ…
အဲအဲပါချင်တိုင်း အိမ်သာမတွေ့ပါစေနဲ့… ဟီးး.. ဟီးး..
ကျောက်သငှေးကို ဆွပြီး ခေါ်ထုတ်ရတာဘဲ.. တက်နိုင်ဝူး… :cool: :cool:
ခုတော့ ခုန်လို့ တောင် မရတော့ဘူးဆိုပဲ
ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ်..အရူးမကြီးကို ပစ်ပြီး ကဲချင်ဦး
မောင်ပေက နင့်ကို ဒီအချိန်မှာ
ရန်ကုန်မှာ ဘယ်သူမှ ဒီလုပ်ငန်း မလုပ်သေးဘူး
သူကြီးပြောတဲ့ မီလီယံ ဘိဇနပ်နော်
မြို့ထဲ အရှုးနှင်ချင်သူများ ကိုပေါက်ဖော်နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
ဟာ … အတော်ပဲ …
တိုတိုပေါက်ပေါက် … များတို့ အိမ်ရှေ့မှာလည်း အရူကြီးတစ်ယောက် (အရူးမ မဟုတ်) အဲဒီလိုပဲ …
အဲဒီ အရူးကြီးကို များတို့က ကြောက်လို့ နှင်ထုတ်ရဲဘူး …
အဲဒီ အရူးကြီးက သူ့ကို မကြိုက်တာ သွားကြောရင် ဟိုဟာကြီး လှန်လှန် ပြတာ …
ပြီးတော့ ကြောတော့ပါဘူး ….
အဲဒါ တိုတိုပေါက်ပေါက် လာရောက် တူညီပေးပါလားဟင် …. လို့
စိန်ပေါက်ကို ကြိတ်ခိုက်နေတဲ့ ရှေ့တိုက်က ကောင်မလေး (မော်ဒယ်ဂဲ အသစ်စက်စက်လေး) အထင်လွဲသွားဘီ။ အသဲနှလုံး မရှိတဲ့လူဂျီးတဲ့…။ အရူးမကို ပြန်ခေါ်လိုက် ပြန်ခေါ်လိုက်..။ ထောင်မြင်ရာစွန့်ဆိုတာ မကြားဖူးဘူးလား…။ ဟိုက လုံးဝ အမှန်အကန်လေးနော်…။
ထောင်မြင်ရာစွန့် တာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး
အရူးမနဲ့ ညားနေဦးမယ် ဘိုးကြောင်ရဲ့
တော်သေးတာပေါ့ဒေါ်စိန်ပေါက်ရဲ့။ မတော်ဟိုကသူ့အထုပ်ဆွဲလို့နပန်းဖက်လုံးရင်ဒွတ်ခ။ ဒေါ်စိန်ပေါက်ဗလ နဲ့တော့အင်း ဒွတ်ခဒွတ်ခ။
များဗလနဲ့နပန်းဖက်လုံးရင်တော့ အီးထွက်သွားနိုင်ပါရဲ့တော်
သိဘီ သိဘီ …
အဲ့လက်ကြီး သေချာမဆေးဘဲ အရက်-၀ါးဒီး ဆက်ဆွဲတယ်မဟုတ်လား..
အဲ့လာကြောင့် ညည်း တဗျစ်ဗျစ် ဖြစ်နေတာ…
ကျောက်ဆြာ ဘောပေ ကိုတော့ မနေ့က ချက်ရွမ်းထဲ တွေ့မိသား
အရူးမနှင်ဖို့ ကြိုးစားခန်းမှာ ကိုပေ မပါလို့ မဖြစ်ဘူပေါ့။
ကိုပေ ရေအမြန်လာပါတဲ့ဗျို့ ။ကိုစိန်ပေါက်ပေါက် အား
အရူးမ နှစ်ထုတ်ပုံလေး တော်တော် သဘောကျသွားတယ်
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မောင်ပေနဲ့ အရူးမနဲ့က ဘာတော်တာလဲဟင် …..
မောင်ပေအရမ်း ပေလို့ရူးသွားတာ..
ဟိုက် တကယ်လားဟင်။ပြောတော့ ကိုပေက ဒီနွေမှာ ငပလီမှာ ကဲမယ်ဆိုဘဲ။
အရူးမလေးက သူပေလို့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
စိန်ပေါက်ပေါက်ကြောင့် အရူးမတောင်ထွက်းပြေးရတယ်တဲ့တော်ရေ့………ရွာထဲလိုက်ဖွဦးမှ……… ပိုမြန်အောင် မြင်းလေးစီးသွားမယ်…….. ဒက်ကလောက် ……ဒက်ကလောက်……ဒက်ကလောက်…
မိစိန်ပေါက် နင်ရူးရင်ဘယ်နားသွားအိပ်မလဲစဉ်းစားထား…ဒါမျိုးဆိုတာ ၀ဋ်လည်တတ်တယ်အေ့…
ဟုတ်ပါ့ အတော်ဆိုးလိုက်ထှာ …. ဒီမိန်းမကြီး သူ့ယောင်္ကျားဆိုင်များ မှတ်နေသလား
နင်တို့ ကနှင်လွှတ်ရအောင် င့ါလက်မှတ်ပါလား.. ဆိုတော့ ရူးနေတာတောင် ကွာရှင်းရင် လက်မှတ်ထိုးပေးမှ ရတာ သိနေသေးတယ် … အတော်အရူးပါးပဲ
ဒီလိုဖြစ်နေတာတောင် ဒီဆိုင်သူပိုင်တယ် ထင်နေသေး …. “ငါကပိုင်ရှင်…နင်တို့ က ဘာလဲ” ဆိုပြီး အရူးကွက်နင်းသေးဗျယ။
တော်သေးတယ် ကိုစိန်ပေါက် နည်းရှိပေလို့ …. အတော်ဆိုးတဲ့ အရူးမနော်
သူ့ အထုတ်တွေလွှင့်ပစ်မယ်ဆိုမှ ဥစ္စာခြောက်ပြီး ပြေးတာ
ဒီမနက်လဲ ဘယ်တိုက်မှာ သောင်းကျန်းနေလဲမသိဘူး
အိမ်တစ်အိမ်က ရဲစခန်းဖုန်းဆက်တိုင်လို့အရူးမကို လိုက်ရှာနေကြတယ်
များတို့ ရှေ့ ပြန်မလာတာ
အန်ဇာတုံးတို့ ရပ်ကွက်ထဲက အရူးလို လှန်ပြရင် နင့်ကိုပဲ လာနှင်ထုတ်ခိုင်းရမှာ
ဟိုကတော့ ဘယ်နှယောက်လာလာ လှန်ပြမှာပဲ … တဲ့ …
ဒီရွာထဲမှာလည်း အရူးတကောင်ရှိတယ်..လူတကာကို ၀ါးလုံးချီးသုတ်ပြီး လိုက်ရမ်းနေတတ်တဲ့ အရူးလေ..
သူက ဘ၀င်ရူး ၊ သူ.ကိုရော နှင်ထုတ်ပေးပါလား မပေါက်ပေါက်ရဲ.။
ဘင်လာဒင်နဲ့ မပုတင် ဟုတ်တော့ဘူးဟ …
ဒီမှာ ကိုဝါဒ က ….
ကပေါက်ဖော်နဲ့ …. ကွက်လပ် ဖြစ်အောင် လုပ်နေဘီ …
အဲအရူးကတော့ မင်းအုပ်စိုးဒုံးကျည်နဲ့ ထုတောင် ရမှာမဟုတ်ဘူး
အဆဲဆို အထုအရိုက်ခံပြီးကို ရွာထဲ အရူးကွက်နေမဲ့
အားနေ ဆဲဆိုနေတဲ့ အရူးမ
သူ့ ဆီက သွားတောင်းရင်
နံပတ်တော့ မရဘူး နံပြားပဲ ရလိမ့်မယ် သဂျီးရေ
သူ့ဆီက နံပြားနဲ့ နင့်နံပြားလဲလိုက်ပါလား
နင့်ဟာက ကြာပြီဆိုတော့ ဒိတ်ဖြစ်နေပြီ။
အော် အရူး အရူး ကြာကြာနေ သူမရူးဘဲ ကိုယ်ရူးရမှာတောင်စိုးရတယ်
အော် အော်၊ ကိုစိန်ပေါက်ဖေါ်ကြီးရယ်
ကိုပေ ကလည်း တစ်ကယ်ပြတ်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေတာနေမှာဘာ၊
ခက်တာက စိတ်ရောဂါသည်တွေကို လာခေါ်ဘို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံအကြောင်းကြားရင်၊လူနာအတွက်
တာဝန်ခံသူရှိမှ သူတို့ကလက်ခံတာမျိုး၊အဲ ဒါ၊ တစ်ခါတည်း သူ့ဆေးဘိုးတို့ ဘာတို့အလှူထည့်ရရော၊ ဆက် သွယ်ဘို့လိပ်စာတွေပါပေးရရော ၊ရွှေမျိုးရင်းခြာမဟုတ်ရင်ရပ်ကွက်၊ ရဲထောက်ခံစာတောင် လိုအပ်ရင်တောင်းသေး ဆိုတော့ ၊တော်ရုံဘယ်သူမှမပို့ရဲတော့ဘူးလေ။ မဖြစ်မနေဆုရင်တော့၊ရပ်ကွက်
လူတွေရှေ့ကျရင် အရူးမ အရူးမ နဲ့
ဘယ်သူမှ မတွေ့တဲ့အခါကြရင် ညီမလေး ညီမလေး ဆိုပြီး
တစ်ခါလာ 200 ပေးရတယ်။
ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက နွမ်းပါးလို့ ရူးမှန်းသိရက်နဲ့ မကြည့်နိုင်လို့ မစောင့်ရှောက်နိုင်လို့ လေလွင့်နေတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတခုခုကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ပြီး ရူးသွားတာလားမသိဘူး။ ရဲစခန်းက လူတွေ က စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကို ပို့ပေးရင်တောင် ပို့ဖြစ်ရင်တောင် ဆေးရုံက စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပါ့မလား မသိဘူး။
ဒီလိုမျိုး ရူးပြီး လေလွင့်နေတဲ့သူ တွေ မန္တလေးမှာ လည်း တွေ့ဖူးတယ်။ မနက်တိုင်းကျုံးဘေးမှာ လမ်းလျှောက်စဉ်တုန်းကပါ။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ခပ်ပိန်ပိန်အမျိုးသမီးတယောက်။ အဲ့လိုပဲ ကျုံးဘေးမှာ မနက်စောစော ဆို ခွေအိပ်နေတတ်တယ် ။ အကျီ င်္လည်း တခါတခါ မကပ်ဖူး ။ ထမိန်ရင်ခြားနဲ့။ နောက်တော့ မမြင်မိပြန်ဘူး။ နောက်တခေါက်ပြန်တွေ့ဖြစ်တော့ ကလေးလေးမွေးပြီးနေပြီ။
အော် ..လူတွေ လူတွေ အရူးလည်း ချမ်းသာမပေးဘူးလို့ တွေးမိတယ်။ ကလေးကလည်း ၀ဋ်ကြီးရှာတယ် ထင်ပါတယ်။ နွေမိုးဆောင်းမှာ အကျီ င်္မပါတာ များတယ်။ တုံးလုံးလေး။ တော်သေးတာက ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတာပါ။ မိန်းကလေးသာဆို ဘ၀က နစ်ပြီးရင်း နစ်မယ်။ နောက်မနက်လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေက သူတို့ဝတ်လာတဲ့ ဂျာကင်လို အားကစား အကျီ င်္လေးတွေ ချွတ်ပြီး ပေးသွားတာတောင် ၀တ်ရကောင်းမှန်း မသိရှာဘူး။ ဟိုပစ်ဒီပစ် ။ နောက်နေ့ နောက်တယောက်ကထပ်ပေး ။ ဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်နေတယ်။ သားအမိ နှစ်ယောက်တညလုံး ဘယ်လိုနေကြရှာတယ် မသိပါဘူး။
ရွာသာကြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို ရောက်တုန်းက ကုသလို့ သက်သာနေတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် မိသားစုတွေက လာမခေါ်ကြတော့ဘူးတဲ့လေ။
မိသားစုက ဖေးဖေးမမလေးနဲ့ အတူနေရရင် လူကောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ….
ခုတော့လည်း ဆေးရုံမှာ မကောင်းတကောင်းနဲ့ နေကြရရှာတယ်။
ခင်ဗျားကြီးဖာသာ မူးကြောင်ရူးကြောင် နဲ့ ပင့်တုန်းခဲ့ပင့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးလေး ကို အဲ့လို ရက်ရက်စက်စက် မပစ်ပယ်သင့်ကြောင်း ၊ အီကွန်မင့်ဖြင့် ကျွန်ုပ်မောင်ပေ မှ အသိပေးလိုက်ပါဒယ် ခင်ဗျား ။
ဟယ် ကိုပေက သူနဲ့ ဆိုင်ဘူးတဲ့။ကိုပေါက် ပင့်လာတဲ့ ကိစ္စပါတဲ့။
ဒေါ်စိန်ပေါက်ရေ—ကျွန်တော်တို.နားမှာလည်း အသက် ၂၀ အရွယ် အဖေမသိ
ကလေးတစ်ယောက်အမေ မရူးတဲ. သူတစ်ယောက်ရှိတယ် ၊သူ.ကလေးပါတဲ.ချီးနေ.တိုင်း
စိန်ပေါက်ပေါက် ရဲ့ လက်စွမ်း ကလဲ မခေ ဘဲကိုး။
ရေးထားတာများ အဲဒီ စိတ်မနှံ့သူလေး ကိုတောင် မြင်မိပါသေးရဲ့။
အရီးသာဆိုလဲ ဖြစ်အောင် နှင်ထုတ်မိပါဘဲလေ။
ပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက် ဖတ်ရင်း ငယ်တုန်း ကကြည့်ရတဲ့ “ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီ” ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို သတိရမိသေးတယ်။
မင်းသမီး က မရူးခင် မင်းသား နဲ့ ရီးစား။ နောက် မိဘတွေကို ဓားမြတွေ သတ်တာတွေ့ပြီး ရူးသွားရော။
အဲဒါကို မင်းသားအဖေကြီး က ယုတ်မာလို့ ကိုယ်ဝန်ရ။ အဲဒါ သူ့အဖေ လက်ချက်လို့ မင်းသားက အတတ်သိတယ်။
သူက မင်းသမီး ကို အနားမှာ နေပြီး အမြဲ စောင့်စောင့် ကြည့် နေတော့ ပါတ်ဝန်းကျင် က သူ့ကို စွတ်စွဲ ပြီး ယူခိုင်းတာကို မယူဘဲ ငြင်းတော့ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးထိုးကြ နှက်ကြရင်း နောက်ဆုံး သေရော။
သေတဲ့ အထိ အဖေကို ဘာမှ မပြော နဲ့ လို့ ပိတ်သွားသေးတယ်။
အတော် ဂေါက် တဲ့ မင်းသား။
ဒီလောက်တောင် မိဘ ကျေးဇူး စပ် ချင်ရင် ကိုယ့်အဖေ တာဝန်ကို အေးအေးကြည်သာ ယူလိုက်ပါလား။
အမှန် က ဒါကို ပြောဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
လိုရင်း ပြောရရင် အရူးမ က အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲ ကလို ချောချော လေး ဆိုရင်၊ သူ ဆိုပုံ၊ ကပုံ လေးကလဲ နားဝင်ချိုမယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ။
စိန်ပေါက် တစ်ယောက် အဲဒီ အရူးမလေး အိပ်မဲ့နေရာမှာ ရေတွေ မဖြန်းဘဲ ပန်းတွေများ သွားခင်း ပေးမလား လို့ ……….
တွေးကြည့် မိတာပါ။ ;-)
Pooch ပေးလိုက်တဲ့ မှတ်ချက် (နာမည် ကျန်ခဲ့လို့)
အရူးမ သွားရင်းနဲ့ သီးချင်းလေးတစ်ပုဒ်ငြီးသွားတယ်“မောင်အရင်လို ဟုတ်တော့ဘူး ဟုတ်တော့ပါဘူးကွယ်”တဲ့
အရူးမက သူ ခလေးမွေးပြီးကာစ သူ့ ယောက်ျားရယ် မောင်ရယ် ရန်ဖြစ်တာ
မောင်က ယောက်ျားကို သတ်လိုက်လို့ထောင်ထဲရောက် .ယောက်ျးက သေ
အဲတာမြင်ပြီး ရူးသွားတာလို့ ပြောတယ် အရီးရေ
သေချာတော့ မသိပါဘူး..ရပ်ကွက်ထဲက လူတစ်ယောက်ပြောပြတာပါ..
အရူးမ အိပ်ယာကို ရေဖြန်းတဲ့လူလဲ
အဲညက ရေဖြန်း၊နှင်ထုတ်ပြီးတော့ မနက်ကျ အကြောအအေးပတ်ပြီး ခြေထောက်တစ်ချောင်း
ထော့နဲ့ထော့နဲ့ ဘ၀ရောက်နေတယ်
အဲဒီမနက်က အချိန်မီ မနိုးရင် တစ်ခြမ်းလုံး သေသွားနိုင်တယ်ပြောတယ်.
ဖျဲသီး,မဟာ ထမိန်ကြီး ၀ါဒ,သဂျီး,ဒေါ်Harumoto,ဘကြီး,မိုက်ကယ်ချီးပွ,
လေးပေါက်,မပူးခ်ျ,ကိုကို အဲလေ..မမ,ဒေါ်ပေ,ကိုSurmi,,ဦးရီးလတ်,ဦးmg mg နဲ့ 
ကိုကို.မမတွေ ကျေးဇူးပါဗျို့ 
သဂျီး နှစ်လုံးပြူးကို ကြောက်လို့ တစ်ယောက်ချင်းစီ အကြောင်းမပြန်တော့ပါဘူး.
အခုမှ သဂျီး၂လုံးပျူးကို ကြောက်နေဘီပေါ့ ဟုတ်စ
သင်္ကြန်မှာ သဂျီးလာတုန်းက ပြသွားတယ် မို့လား